Budata Mozilla Thunderbird maka Windows
Budata Mozilla Thunderbird
Budata Mozilla Thunderbird,
Mozilla Thunderbird, onye na - azụ ahịa ozi ngwa ngwa, nke bara uru ma baa uru, na - abịawanye oke oke na atụmatụ ya maka ụdị ya ọhụụ
Ihe kachasị dị egwu nke Mozilla Thunderbird, nke na-abịa na ihe ọhụụ na nhazi ya, arụmọrụ ya, ndakọrịta weebụ, yana ịdị mfe nke iji, bụ na ọ na-emepe emepe taabụ, otu nime atụmatụ ndị kachasị ewu ewu nke ihe nchọgharị Mozilla Firefox, dị maka gị e- Gburu. Nnyocha ngwa ngwa na nzacha dị mma, nchịkọta akụkọ na ntinye dị mfe na ọkachamara ntọala bụ atụmatụ ndị ọzọ pụtara ìhè.
Mozilla Thunderbird Atụmatụ: Searchchọ na enwekwukwa nzacha Njirimara Gburu gị mail; Nwere ike chọọ site na onye na-ezipụ, mkpado, mmadụ, oge oge, faịlụ na nzipu ozi ndepụta na ịnweta ha ọsọ ọsọ. Thunderbird, nke na-edepụta ozi gị niile ma mee nke a na taabụ ọhụrụ, ga - enyere gị aka ịchọta ihe ị na - achọ ngwa ngwa o kwere mee.
Archive gị Gburu Nihi archiving atụmatụ, ị nwere ike ịchekwa ihe ị chọrọ ka ị ghara-abata e-Gburu na Archive ngalaba. Nụzọ dị otu a, inwere ike idobe Igbe mbata” gị nenwetaghị ozi.
E tinyela Ozi Mmasị Tab nke ị maara nke ọma site na ihe nchọgharị Firefox ka etinyegoro na Thunderbird. Yabụ ị nwere ike mepee ozi ọ bụla na taabụ dị iche site na ịpị abụọ na ozi ịntanetị. Mgbe imechi mmemme ahụ, taabụ ndị na-emeghe ga-echekwa ma mepee ya na mbido ọzọ. Njirimara a ga - enyere gị aka ịchọgharị akwụkwọ ozi niile ọsọ ọsọ.Ezigbo Auto-Complete na Global Search ga - enyere gị aka ịchọta email ahụ na njirimara mmecha site na akwụkwọ adreesị Thunderbird mgbe ị na-achọ nọhịa Global Search. arụkarị ọrụ nzi ozi kachasị na Thunderbird site na iji ọkachamara mmalite ozi ọhụụ Ihe niile ị ga - eme bụ itinye aha, e-mail na okwuntughe gị. The ọkachamara ga-akpaghị aka tinye gị e-Gburu ka usoro ihe omume gị.Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Ọhụrụ Ejiri mpaghara a nwere ike ịhazi onwe gị site na ịgbakwunye bọtịnụ dịka azịza, ihichapụ, gaa nihu na ogwe ngwaọrụ, nke gunyere Ogwe ọchụchọ ọchụchọ Global.
Smart faịlụ Site na njirimara a, ị nwere ike ijikọta ozi sitere na akaụntụ e-mail dị iche na otu faịlụ dịka njirimara ha Nchịkọta Ozi Ọhụrụ Na-ahọpụta ihe karịrị otu ozi, ị nwere ike ịlele nchịkọta. Akaụntụ email gị na Thunderbird maka gị ma nye gị ohere ijikwa ha site notu mpaghara Ọhụrụ Onye Njikwa Ihe njikwa ahụ nwere ike ịchọta ma wụnye ihe mgbakwunye na isiokwu niile nke Mozilla Thunderbird 3 maka gị. Thunderbird, nke gụnyere ọtụtụ isiokwu dị iche iche na plugins maka nhazi, na-enye gị ohere ịhazi atụmatụ ndị a na otu njikwa.
Cannwere ike idezi ozi nke ndị mmadụ na adreesị gị akwụkwọ na otu Pịa. Otu pịa ga-ezu iji tinye mmadụ na adreesị gị akwụkwọ. Na mgbakwunye, site ugbu a gawa, Thunderbird ga-eso ụbọchị ọmụmụ nke ndị mmadụ na adreesị gị akwụkwọ maka gị.Mmeziwanye Gmail Integration Ihe omume a, nke e tinyekọtara na Gmail, na-arụ ọrụ nụzọ kwekọrọ na akaụntụ Gmail nasụsụ ọ bụla, na-enye mmekọrịta dị netiti faịlụ .
Thunderbird phishing njikere system na-echebe gị site wayo e-Gburu na-anwa weghara onwe gị na ozi nzuzo. Dị ka nlezianya nke abụọ, ọ na-agwa gị URL nke ị pịa imeghe ma mepee ebe ọzọ karịa ebe ha pụtara. Mmelite nche ndị a pere mpe (na-abụkarị 200 KB - 700 KB) ma nye gị naanị ihe ịchọrọ, na-enye ohere ka ebudata ma melite nchedo nche ngwa ngwa. A na-emelite Thunderbird nihe karịrị asụsụ 30 na-agba ọsọ na Windows, Mac OS X na Linux site na sistemụ arụmọrụ akpaka.Kwadebe Inbox gị ndị ọrụ nwere ike ịgbasa ikike Thunderbird ma gbanwee ogo ya na ọtụtụ narị mgbakwunye. Ihe mgbakwunye Thunderbird nwere ike inyere gị aka nakụkụ dị iche iche dị ka ịdebe kọntaktị, ịkpọ oku na IP, ịge egwu, na ịdebe ụbọchị ọmụmụ na akwụkwọ adreesị gị. I nwedịrị ike ịgbanwe ọdịdị Thunderbird iji kwekọọ na uto gị.
Mkpofu ... Mozilla emeela ya otu nzọ ụkwụ nihu site na imeziwanye nzacha spam nke Thunderbird. Email ọ bụla ị natara na mbụ gafere nzacha spam Thunderbird. Oge ọ bụla ịkọwara spam, Thunderbird na-amụta ya ma melite nzacha ya na oge. Yabụ naanị ị gụrụ akwụkwọ ozi na-arụ ọrụ. Thunderbird na-ejikwa ihe nzacha spam nke onye na-eweta ozi iji gbochie igbe mbata nefu. Open Source Safer Netiti Thunderbird bụ usoro mmepe mmepe nke ọtụtụ puku ndị mmepe na ndị ọkachamara nwere ahụmahụ na ndị ọkachamara nchekwa gburugburu ụwa. Uzo anyi nke imeghe na ndi okacha amara nke ndi oru anyi na eme ka ngwa ahia anyi di nchebe ma megharia ngwa ngwa.ọ na - enyere anyị aka iji nyocha nyocha na nyocha nyocha nke ndị ọzọ na-enye, nke ga-eme ka nchekwa zuru oke.
Mozilla Thunderbird Ụdịdị